Semalt မှအကြံဥာဏ် - သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Phishing နှင့် Malware Scam များမှမည်သို့ကာကွယ်နည်း
လက်ရှိအွန်လိုင်းကမ္ဘာတွင်သုံးစွဲသူများသည်ခြိမ်းခြောက်မှုများစွာကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထိုခြိမ်းခြောက်မှုများသည်အသုံးပြုသူများအား malware နှင့်ပါ ၀ င်သည့်ဆိုဒ်များနှင့်လင့်များကိုနှိပ်ရန်ဆွဲဆောင်ရန်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေသည်။ များသောအားဖြင့်တင်ပြကြသူအချို့မှာ "သင်၏အကောင့်ကိုယခုအသစ်ပြောင်းပါ!" သို့မဟုတ်တနည်းအားဖြင့် "သင်သာခရုဇ်အနိုင်ရခဲ့သည်!" ကဲ့သို့ IRS မှတစ်ယောက်ပင်အသုံးပြုသူအတွက်ပြန်အမ်းငွေရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည် phishing လောကအတွက်အသစ်ဖြစ်နေပါကထိုဖော်ပြချက်များသည်စစ်မှန်သောအခွင့်အလမ်းများနှင့်တူသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအထမြောက်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောအီးမေးလ်များ၊ စာသားများ၊ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်ပို့သော "ငါးစာ" ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူ၏ငွေကြေး၊ စကားဝှက်များ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပစ်မှတ်ထားပြီးခိုးယူရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Semalt ၏ Customer Success Manager, Andrew Dyhan သည်သင်၏စနစ်အားအန္တရာယ်ရှိသောကူးစက်ရောဂါများမှကာကွယ်ရန်အဖိုးတန်လမ်းညွှန်တစ်ခုပေးသည်။
အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများ၏ဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့် IRS သည်ပြည်နယ် ၀ င်ငွေဌာနနှင့်အခွန်လုပ်ငန်းမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ လက်ရှိရှိနေသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုခြိမ်းခြောက်မှုများအကြောင်းပညာပေးသည်။ အုပ်စုသုံးစုက ၀ န်ထမ်းတွေကိုကူညီခြင်းအားဖြင့်ဒီဟာကိုလုံးဝအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အဖြေတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
Phishing သည်သိသိသာသာပြworksနာကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး၎င်းသည်ဟက်ကာများအတွက်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့်၎င်းအလုပ်လုပ်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လုံခြုံရေးကာကွယ်မှုကိုကျော်လွှားရန်နှင့်ငွေနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုနေ့တိုင်းဟက်ကာများကနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများသည်သူတို့၏အခွန်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောကြောင့်လူတို့သည်အမှားမပြုသင့်ပါ။
ဒီလိုရာဇ ၀ တ်မှုမျိုးကိုကျူးလွန်တဲ့အခါကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာမဟုတ်ဘဲထိန်းချုပ်သူကိုအသုံးပြုတာပါ။ စက်များသည်သုံးစွဲသူများထည့်သွင်းပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်သူနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဆင့်အတန်းကိုမူမသိရှိရပါ။ အသုံးပြုသူကိုယုံကြည်သောသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုသောပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည်တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်သူတို့သည်အသိအကျွမ်းအကောင့်ကိုဖောက်ထွင်းပြီး spam အီးမေးလ်များပို့ရန်လိုအပ်သည့်အဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့သည်ဘဏ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခွန်ဆော့ဖ်ဝဲပေးသူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ အချို့သောအချိန်များတွင်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ပြောဆိုချက်ကိုပိုမိုယုံကြည်ရန်အတွက်အစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုရန် ပို၍ ရှည်လျားသောကာလသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။
ဤအရာအားလုံးကိုသတိရသင့်သည့်အချက်မှာတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှအီးမေးလ်ကဲ့သို့သောအလွတ်သဘောဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လူတစ် ဦး အား၎င်းတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ပေးရန်တွန်းအားပေးရန်မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုသို့မဟုတ်မဆိုတရားစွဲဆိုမှုများသည်တရား ၀ င်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Inbox (သို့) လုံခြုံမှုမရှိသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသို့ပေးပို့သောလိမ်လည်မှုအီးမေးလ်များသည်အသုံးပြုသူ၏ဗဟုသုတမရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုရရှိသော malware ၏ရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ရာဇ ၀ တ်သားများအားစက်ပစ္စည်းကိုအပြည့်အဝ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
သံသယဖြစ်ဖွယ်အီးမေးလ်များအားလုံးကိုရှောင်ပါ။ ဖွင့်ပါက၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များကိုမနှိပ်ပါနှင့်။ link ကို browser ၏ address box ထဲသို့ကူးယူပါ။
သတင်းအချက်အလက်အချို့ရယူရန်တောင်းဆိုသည့် phishing လိမ်လည်မှုများကိုမကျူးလွန်မိစေရန်ဂရုစိုက်ပါ။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည် account တစ်ခုအားအတည်ပြုနိုင်မည်လားသို့မဟုတ် update လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အမည်မသိလူတစ် ဦး ပို့လိုက်သောပူးတွဲဖိုင်များကိုမနှိပ်ပါနှင့်။
လူသိများသောအရင်းအမြစ်များမှ software ကိုသာ download လုပ်ပါ။
တခါတရံတွင်ဗိုင်းရပ်စ်များကူးစက်သော popup ကြော်ငြာများကိုပိတ်ဆို့ရန်လုံခြုံရေးဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုပါ။